फेसबुक Archives - Page2of4- Technology Khabar
वर्षमा १ डलर मात्रै कमाउने फेसबुकका सिईओको सुरक्षा खर्च २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । फेसबुकका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मार्क जुकरबर्गको सुरक्षा निकै महंगा हुँदै गएको छ । विभिन्न विवादास्पद घट्नाहरुमा फसिरहेको फेसबुकका सिईओको व्यक्तिगत सुरक्षा र यात्राका लागि कम्पनीले सन् […]
काठमाडौं । कयौं मानिसहरु यस्ता हुन्छन की उनीहरु फेसबुकमा एक भन्दा धेरै एकाउन्ट प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तर उनीहरुलाई सँधै यो समस्या हुन्छ की कसरी एकैपटक ती एकान्टसको म्यासेन्जर प्रयोग […]
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने नभई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी गरिएको बताएका छन्। सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा, विकास […]
काठमाडौं । सोशल मिडिया प्लेटफर्म फेसबुकले भिडियो लाइभ स्ट्रीम गर्नका लागि कडा नियम बनाउन भएको छ । फेसबुकले न्यूजील्याण्डको दुई मस्जिदमा भएको आक्रमणको भिडियो लाइभ प्रशारण भएपछि चर्को आलोचना खेप्दै […]
काठमाडौं । फेसबुकको लाइट एप्स प्रयोगकर्तासहित लाखौं अन्य फेसबुक प्रयोगकर्ताको पासवर्ड सर्भरमा सामान्य अक्षर अर्थात प्लेन टेक्स्टमा असुरक्षित तरिकाले राखेको भेटिएको छ । फेसबुकका करोडौं प्रयोगकर्ताका पासवर्ड त्यहाँका २० हजार […]
यसरी आफ्नो फेसबुकलाई सुरक्षित पार्नुस्, डाटा चोरी हुनबाट बच्नुस्
काठमाडौं । पछिल्लो दिनहरुमा फेसबुकबाट डाटा चोरी भएका समाचारहरु नियमितजस्तै आईरहेका छन् । यूजर्सहरुको व्यक्तिगत र गोप्य जानकारीहरु चोरेर ह्याकरले बिक्रीका लागि राखेको समाचार पनि आईरहेका छन् । जसले गर्दा […]
फेसबुकमा गेमर्सका लागि छुट्टै ट्याब लन्च, यसरी गर्न सकिन्छ प्रयोग
काठमाडौं । सोसल मिडिया प्लेटफर्म फेसबुकले गेमर्सनका लागि आफ्नो एपमा नयाँ ट्याब लन्च गरेकोछ । फेसबुक यूजर्सका लागि यो नयाँ ट्याब मेन नेभिगेसन पेजमा देखिनेछ । सो ट्याबमा क्लिक गरेर […]
विश्वभर फेसबुक र इन्स्टाग्राम बन्द हुनुको कारण के हो ? के भन्यो फेसबुकले ?
काठमाडौं । विश्वभरका सामाजिक संजाल फेसबुक र इन्टाग्राममा समस्या आउँदा यसका प्रयोगकर्ताहरुले समस्या भोगिरहेका छन् । बुधबार बेलुकीदेखि समस्या आएको हुँदा फेसबुक र इन्टाग्राममा पोष्ट, शेयर, कमेन्टका साथै कतिपय अवस्थामा […]
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीइटर बन्द गर्नेसम्बन्धी कुनै सूचना प्रकाशित नभएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले एकआइतवार विज्ञप्ति जारी […]
काठमाडौं । फेसबुकले गत अक्टोबरमा मेसेन्जरका लागि छिटै डार्क मोड ल्याउने घोषणा गरेको थियो, कम्पनीले अहिलेसम्म पनि औपचारिकरुमा सो नयाँ फीचर सार्वजनिक गरेको छैन् । तर पनि यो डार्क मोड […]
फेसबुकले थाहा पाउँछ तपाईँको मुटुको अवस्था, अत्यन्त निजी डाटा संकलनको आरोप
काठमाडौं । सामाजिक संजाल फेसबुकबाट प्रयोगकर्ताहरुको डाटा चोरी भएको र गोप्य जानकारीहरु बाहिर आएको समाचार आजभोली दिनहुँ जस्तो आउन थालेको छ । कहिले फेसबुकले आफैं डाटा बेचेको रिपोर्ट आउँछ त […]
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले सामाजिक संजालको सदूपयोग र प्रयोगको लागि सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक ल्याएको बताएका छन् । उनले सो विधेयकमा डिजिटल हस्ताक्षर, साइबर बुलिंग, […]
काठमाडौं । फेसबुकसहितका अन्य ठूला टेक कम्पनीहरुले फेक न्यूज रोक्न र यूजर्स डाटाको दूरुपयोग रोक्नका लाग अनिवार्य कोड अफ इथिक्स बनाउनुपर्ने भएको छ । बेलायती संसदको डिजिटल, कल्चर, मिडिया र […]
सामाजिक संजाललाई बिधिमा ल्याईँदै
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जालले समाजमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक विषयलाई बढवा दिएको पाइएपछि सरकारले त्यसलाई विधिमा ल्याउने प्रयास थालेको छ । सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, […]
काठमाडौँ । सरकारले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा कडाइ गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरी सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा […]
फेसबुक मेसेन्जरमा ‘अनसेण्ड’ फीचर आयो, पठाएको संदेश मेट्न सकिने
काठमाडौं । विश्वभर सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरिने सामाजिक संजाल फेसबुक मेसेन्जरले नयाँ फीचर सार्वजनिक गरेको छ । फेसबुकले मंगलबारदेखि मेसेन्जर प्रयोगकर्ताका लागि ‘अनसेन्ड’ फिचर ल्याएको हो । अर्थात अब तपाईँले […]
फेसबुकले स्थानीय समाचारहरुमा ३०० मिलियन डलर लगानी गर्ने
काठमाडौं । फेसबुकले विश्वभरकास्थानिय समाचारहरुमा लगानी गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ ।कम्पनीले आगामी ३ वर्षमा विश्वभर ३०० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेर विश्वभर स्थानीय समाचारसँग संयोजन गर्ने छ । फेसबुकले […]
काठमाडौं । विश्वमा धनीका विषयमा धेरैको चासो हुने गर्दछ । अझ टेक्नोलोजी क्षेत्रबाटै अर्बपति भएका मानिसहरुको बारेमा धेरै सोधखोज हुने गरेको छ, किनकी विश्वका धनीको सूचीमा यीनिहरुकै बर्चश्व रहँदै आएको […]